De Efteling: Ozi niile ịchọrọ - Thrilltalk.com
Home/Special/Efteling: Ozi niile ịchọrọ
0 24 Ejiri 2 gụọ
Efteling bụ kasị na kasị ama ogige Netherlands. Onye ọ bụla Dutch gara ogige ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala maara ihe ọ bụ. Ka o sina dị, anyị ka na-enweta ajụjụ banyere ya ogige akụkọ ifo si Kaatsheuvel na ya mere nke a Efteling pụrụ iche na azịza nye ajụjụ gị.
Kedu ihe na-eri Efteling?
N'ihi na ogige ntụrụndụ ejiri Efteling ụdị tiketi dị iche iche. Yabụ i nwere tiketi fakir (Na-akwụ ụgwọ maka ụbọchị 1 na oge ụfọdụ ruo na gụnyere December 18, 2020) a na-efu € 38.
Tiketi iri na otu (Na-akwụ ụgwọ maka ụbọchị 1 na oge ụfọdụ ruo na Disemba 18, 2020) nke a na-efu € 41, -. Ntinye tiketi dragon (Na-akwụ ụgwọ maka ụbọchị 1 na oge ụfọdụ ruo na gụnyere Jenụwarị 3, 2021) a na-efu € 43, -. Nnukwu tiketi mbata (Dabere na ụbọchị 1 ruo Jenụwarị 3, 2021) efu € 45.
Childrenmụaka ruo afọ 4 nwere ike ịbanye na ogige ntụrụndụ n'efu. A na-adọba ụgbọala tiketi na-efu gị costs 12,50
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga oge ụfọdụ, ndenye aha nwere ike ịbụ ihe maka gị. Nwere ike ịkwụ ụgwọ a kwa afọ kamakwa kwa ọnwa.
Criptiondị ndenye aha ịkwụ ụgwọ p / y Kwụ pgwọ p / m *
0 ruo 3 afọ free free
4 ruo 59 afọ € 199,00 € 18,00
Afọ iri isii gbagowe € 185,00 € 16,00
Ọbịa nwere nkwarụ € 155,00 € 14,00
* Min. 12 ọnwa, mgbe ahụ kwa ọnwa kagbuo
Kedu ọrụ ọ bụ na Efteling?
Onweghi ihe na ewe iwe karịa ichere Joris na dragon ahụ, Python, Flying Dutchman ma ọ bụ ikekwe Max & Moritz. N'ụzọ dị mma, ogige ahụ na-eme ka ndị ọbịa mara nke ọma site na akara ngosi dijitalụ na ogige ahụ. Ọ bụrụ na enweghị onyinye dijitalụ na mpaghara ahụ, ịnwere ike ịgafe Efteling ngwa iji hụ kpọmkwem ihe oge nchere nọ na ebe nkiri.
Onye chepụtara Efteling?
Na 1933 enwere atụmatụ iji wuo ogige egwuregwu na ndịda Kaatsheuvel. Ogige egwuregwu a ga-emecha Efteling ibu. Ogige ahụ malitere dị ka egwuregwu na ogige ntụrụndụ, na-emecha mee ka ebe egwuregwu na-aga nke ọma. Usoro iheomume dum nke Efteling buru oke ibu. Chọrọ ịgụpụta ins & outs niile banyere mmalite Efteling? Nwere ike ịlele ya ebe a.
Nwere ike iji ụgbọ njem ọha gaa ogige ahụ?
A na-enweta mbata nke ụgbọ ala site na njem ọha na eze site na Netherlands niile, kamakwa site na Belgium. Nwere ike nweta na-Park pụtara ngwa ngwa site na ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala njikọ, Nnukwu ụlọ nkwari akụ, Ezumike ezumike Efteling Bosrijk ma ọ bụ Ezumike ezumike Efteling Loonsche Land.
Transportgbọ njem ọha na eze site na Netherlands
Site na Amsterdam - Utrecht - Zwolle - Nijmegen - Almere
Were ụgbọ okporo ígwè gaa Den Bosch. Site ebe a enwere njikọ ụgbọ ala na ebe ezumike (ahịrị ụgbọ ala 300, 301, 136 na 800). Gapụ na ọdụ ụgbọ elu Efteling.
Site na Amsterdam Bijlmer / Arena na Almere ị nwekwara ike ịga njem ozugbo na Mọnde, Fraịde, Satọde na Sọnde na Flixbus (akara ụgbọ ala 811).
Site na Maastricht - Venlo - Eindhoven
Were ụgbọ okporo ígwè gaa Den Bosch ma ọ bụ Tilburg. Site ebe a enwere njikọ ụgbọ ala na Efteling (ahịrị ụgbọ ala 300, 301, 136, 800 na 801). Gaa na nkwụsị bọs n'ihu ọnụ ụzọ mbata.
Site na Hague - Rotterdam - Dordrecht - Vlissingen - Roosendaal - Breda
Were ụgbọ okporo ígwè gaa Tilburg. Site ebe a enwere njikọ ụgbọ ala na Efteling (usoro ụgbọ ala 300, 301, 136 na 801). Gaa na nkwụsị bọs n'ihu ọnụ ụzọ mbata.
Transportgbọ njem ọha na eze si Belgium
Site na Antwerp - Brussels
The International ụgbọ okporo ígwè na-agba ozugbo na Breda si Brussels na Antwerp. Tiketi maka International ụgbọ okporo nwere ike zụta site na NMBS International ma ọ bụ site na NS. Mgbe ahụ ụgbọ oloko na-aga Tilburg. Site ebe a enwere njikọ ụgbọ ala na Efteling (usoro ụgbọ ala 300, 301, 136 na 801). Nwere ike iji a zụta tiketi ụgbọ ala site na Arriva ma obu a gbaa ụgbọ-ụgbọ ala tiketi site NS. Biko rụba ama: tiketi ndị a anaghị agụnye ịnweta ogige ahụ.
Site Brussels na Antwerp ị nwekwara ike ịga ozugbo na Efteling on Monday, Thursday, Friday, Saturday na Sunday na Flixbus (akara ụgbọ ala 811).
ndenye aha park
Toverland na-agbasawanye Halloween n'agbanyeghị oge okirikiri